ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှ ပြဌာန်းဆုံးဖြတ်ပေးထား သော နိုင်ငံတော်အာဏာနှင့် လွှတ်တော်များဖြင့် ရွေးချယ်ခံအစိုးရ - Yangon Nation News
သော နိုင်ငံတော်အာဏာနှင့် လွှတ်တော်များဖြင့် ရွေးချယ်ခံအစိုးရ –
ယနေ့မိမိတို့ပြည်သူ ပြည်သားများသည် ယခင်အာဏာသိမ်းတပ်မတော်အစိုးရ၏
အခြေအနေများကို ရင်ဆိုင်ခဲ့သော လူပုဂ္ဂိုလ်၊အဖွဲ့အစည်းများကို အားပေး၊ဝန်းရံထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်၊
အဘယ်၍ဆိုသော် နိုင်ငံတော်ကိုအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်၊အဖွဲ့များအား၊အဓ္ဓမသမားများဟုကမ္ဘာ့အသိုက်အဝန်းက လက်ခံထားကြသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်၊
ဒါကြောင့်နိုင်ငံတိုင်းမှာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်သော တပ်မတော်မှ အာဏာမသိမ်းနိုင်စေရန် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကထိန်းချုပ်ထားနိုင်သော အခြေခံမူဥပဒေများကို အများဆန္ဒနဲ့အညီ အတည်ပြုပြဌာန်းထားကြကာ၊
လူထုက ကြိုက်နှစ်သက်၊ယုံကြည်လို့အောင်နိုင်မဲများပေးကြ၍ ရွေးချယ်ခံအစိုးရများပေါ်လာစေရေးနဲ့နိုင်ငံတိုင်းက သက်တမ်းသတ်မှတ်ပြီး၊အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပသည့် ဥပဒေများသတ်မှတ်ပြဌာန်းထားကြပါတယ်၊
နိုင်ငံတိုင်းကတော့ သူ့ဥပဒေနဲ့သူ ရွေးကောက်ပွဲကိုဆောင်ရွက်နေကြပြီး၊
လူထုက ထောက်ခံမဲများပေးမူဖြင့်နိုင်တဲ့သူ၊အဖွဲ့စည်းနဲ့ ရှုံးတဲ့သူ၊အဖွဲ့အစည်းများ ကြားမှာ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆိုင်သောပြသနာများကတော့ရှိနေစမြဲပါဘဲ၊
သို့ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ၊နည်းဥပဒေများ၊စည်းမျဉ်းများ၊စည်းကမ်းများ၊အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊အမိန့်များ၊ညွှန်ကြားချက်များကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မနှင့်အညီဥပဒေများကိုသတ်မှတ်ပြဌာန်းထားရပါတယ်၊
အထူးသဖြစ် မိမိတို့နိုင်ငံလို အာဏာရှင်စနစ်မှ နိူးထွက်၊ရုန်းထလာခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံမှာကတော့ ပြည်သူများတောင်းဆိုခဲ့ကြသည့် ဒီမိုကရေစီစနစ်နိုင်ငံရေးထူထောင်စအချိန်မှာကတော့၊
ယခင်အာဏာရှင်စနစ်ကြောင့်ချမ်းသာကြွယ်လာသော အာဏာရှင်သိုက်အဝန်းဆီမှ အခွင့်အရေးမျှော်လင့်နေကြသော နိုင်ငံရေးသမားများနှင့်အခြားလူရှုတ်များကို အတော်အတန်ရင်ဆိုင်နေကြရအုံးမှာသာဖြစ်ပါတယ်၊
ထိုသို့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကြရင်းဖြင့် မိမိတို့နိုင်ငံတွင်ဖြစ်စေချင်ကြပါသော ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအခြေပြုခိုင်မာပြီး၊အားကောင်းသောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးဖြစ်တည်၊အထိုင်တကျဖြစ်လာစေရမှာပါ၊
ပြည်သူများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မူက ပြည်ထောင်စုကြီးအတွက် ခွန်အား၊အင်အားတွေဖြစ်ပါတယ်၊
ပြဌာန်းထားသော တည်ဆဲဥပဒေများကို လိုက်နာကျင့်သုံးသည့် ယဉ်ကျေးမူကိုခိုင်မာလာစေပြီး၊
တိုင်းပြည်နဲ့ တိုင်းသူ ပြည်သားများအား ဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးနိုင်သော ဥပဒေအဆိုးများကိုလည်း တဖြေးဖြေး ပြင်ဆင်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်၊
ယခုအခါမှာ မိမိတို့နိုင်ငံသားပြည်သူအများဟာ (၁၉၆၂)(၁၉၇၄)(၁၉၈၈) အယူအဆအတွေးအမြင်တစ်ခုချင်းအပေါ်မှာသာ စုံရပ်နေကြတဲ့အခြေအနေမဟုတ်တော့ပါဘူး၊
Globalization နဲ့အတူ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံ၏ ကကောင်းမွန်သောပစ္စုပ္ပန်နဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်လာနိုင်မည့်
အနာဂတ် အခင်းအကျင်းအပေါ်မှာ တက်တက်ကြွကြွ ရပ်နေကြပါပြီ၊
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများစွာ၏ အခင်းအကျင်း၊ဖြစ်စဉ်များကိုလည်း အဆက်မပြတ်လေ့လာအကဲခတ်နေကြတဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့လူမူစီးပွားများ၊အတတ်ပညာများကို အားကောင်း၊ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့ အကြားမလပ် ကြိုးစားရုန်းကန်ကြပါပြီ၊
(၁၉၆၂)(၁၉၇၄) (၁၉၈၈) ခေတ်ကာလများ၏ အတွေး၊အမြင်၊အယူဆများ အပေါ်မှာသာ
(၂၀၂၀)ပြည့်နှစ်၊နိုဝင်ဘာလ(၈) ရက်နေ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူ ပြည်သားများ၏ ဆန္ဒမဲပေးမူများကိုကြည့်လိုက်ပါ၊
ပြည်သူများဟာ သူတို့ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အမြဲတစေ ဗိုလ်ကျ အနိုင်ကျင့်စိုးမိုးခဲ့ကြသူအသိုက်အဝန်းနဲ့ ထိုအသိုက်အဝန်းအတွက်ရေလာမြောင်းပေး၊ပြောဆို၊ပေါင်းသင်းဆက်ဆံသူနဲ့အဖွဲ့အစည်းမှန်သမျှကိုစောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ကြသလို၊
ကိုယ့်ကိုကိုယ် နိုင်ငံရေးသွေးနားထင် ရောက်နေကြသူများကိုလည်း၊
ယနေ့တည်ဆဲ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ ပြဌာန်းထားသော ဆုံးဖြတ်ချက်အာဏာများကိုရေးသားတင်ပြပါမယ်၊
ပုဒ်မ(၂၉၄) နိုင်ငံတော်တွင် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တစ်ရပ်ထားရှိသည်၊
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ၂၀၀၈ တွင် တရားလွတ်တော်ချုပ်သည် ဝါစဉ်တွင်အမြင့်ဆုံးတရားရုံးဖြစ်သည်ဟု ပုဒ်မ(၂၉၄) တွင်အတည်ပြုပြဌာန်းထားသော်လည်း၊
ပုဒ်မ(၂၉၆)အရ စာချွန်တော်အမိန့်ဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ထုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသည်ဟု ပြဌာန်းထားသော်လည်း၊
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၌ ပါဝင်ပြဌာန်းထားသော အခွင့်အရေးများကို ၊
သေချာစွာ စည်းကြပ်ရာတွင် ဤစာချွန်တော်အမိန့်များကို အသုံးပြုရန်ဖြစ်ကြောင်း၊
၌ ပုဒ်မ(၃၉၁) မှ ပုဒ်မ(၄၀၃) အထိ၊
ပုဒ်မ(၃၉၉) ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ တာဝန်များ၊
အောက်ပါကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ပြည်ထောင်သုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ဆောင်ရွက်ချက်များသည် အပြီးအပြတ်အတည် ဖြစ်စေရမည်၊
လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့် ရပိုင်ခွင့်များကို ဥပဒေပြဌာန်းသတ်မှတ်ရမည်။
၎င်းဥပဒေ၊ပုဒ်မများသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ တိတိကျကျ ဖွင့်ဆိုပြဌာန်းထားသော၊
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ပါပြဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုဖြစ်စေ၊အခြားဥပဒေပါပြဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုဖြစ်စေမဆန့်ကျင်ဘဲ၊(ပုဒ်မ ၂၉၅ /ဃ)၊
သို့ပါသောဖွင့်ဆိုပြဌာန်း၊ဆုံးဖြတ်မူအရ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၌ပါဝင်သော အခွင့်အရေးများကို စည်းကြပ်ရာတွင် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တွင့်စာချွန်တော်အမိန့်များကိုအသုံးပြုရန် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက အာဏာပေးထားမှု မရှိပါဟုဆိုရမည်သာဖြစ်ပါတယ်၊
နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နှင်ြ့့ပည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်များသို့ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ငယ်တစ်ခုမှ သဘောထားထုတ်ပြန်မှုသည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်ပြဌာန်းထားသောဥပဒေများနှင့်ညီပါရဲ့လား ?
နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်တွင်သာရှိသည့် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့၏ လုပ်ဆောင်မှု၊ထုတ်ပြန်မှုသည် (NGO) သဘောမျိုးရော မဆန်ဘူးလား?
(NGO) များသည် သူတို့လုပ်ရမည့်အလုပ်များကိုသာလုပ်ဆောင်ကြပြီး၊
နိုင်ငံတစ်ခု၏ ကာကွယ်ရေးအတွက်အရေးပါသောလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သည့် တပ်မတော်သည် မိမိအလုပ်မိမိလုပ်ရမည်မဟုတ်ပါလား ?
ရွေးကောက်ပွဲများနှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းစဉ်များ၌ ၊ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေအရဘဲဖြစ်စေ၊
ပုဒ်မ(၃၈/က) အရ နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ဥပဒေနှင့်အညီရွေးကောက်တင်မြှောက်ခွင့်ရှိသည်၊ဟုပြဌာန်းထားမူနဲ့အညီ ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိကြပါတယ်၊
အကယ်၍ မဲဆန္ဒနယ်အချို့တွင်လိုအပ်လျှင် လုံခြုံရေးတာဝန်ကိုသာ ထမ်းဆောင်ကြရမှာမဟုတ်ပါလား ?
ပုဒ်မ(၂၀)(င) အရ ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး၊
ပုဒ်မခွဲ(စ) အရ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်အဓိကတာဝန်ရှိမူတို့အရဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အခြေခံဥပဒေနှင့်အညီလွတ်လပ်၍တရားမျှတသောရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စေရေးကိုသာ တပ်မတော်၏ ဒီမိုကရေစီလိုလားမူအရထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ တပ်မတော်အနေဖြင့်ပါတီနိုင်ငံရေးလညပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိသည့်အပြင်၊ဒီမိုကရေစီကိုလိုလားသည့်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲအား အနှောက်အယှက်ကင်း၍ ငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့်အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအပြည့်အဝတာဝန်ယူ ကူညီဆောင်ရွက်လျက်ရှိခဲ့ပါကြောင်း၊
အပိုဒ်(၁၂) မှာ တပ်မတော်အပါအဝင်အခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီများအပါအဝင်၊
ဟုရေးထားတဲ့အတွက် အပိုဒ်(၁၁)နှင့်အပိုဒ်(၁၂)စာပါစကားရပ်က ရှေ့နောက်မညီပါဟု မြင်ရပါတယ်၊
ဒါပေမယ်လို့မဲပေးခွင့်ရှိသူ မိဘပြည်သူ(၇၀)ရာခိုင်နူန်းကျော်မှ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီဆန္ဒမဲပေးထားမူကို မထီတစ်ထီဖြင့်အတင်းကာရော ပြောဆိုထုတ်ပြန်မူများလုပ်နေကြမူသည် နိုင်ငံအတွင်းတွင် ရှိမလာနိုင်သော နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းဟူသော စကားရပ်ကို တမင်တကာ ရေလာမြောင်းပေး ပြောဆို၊ပြုမူ၊ထုတ်ပြန်နေကြမူများလားဟူ၍ ပြည်သူများမှ မေးခွန်းထုတ်ကြရမလိုဖြစ်နေပါပြီ၊
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင် အထူးသဖြင့်တောလက်ကျေးရွာများတွင် အိမ်ထောင်စုစာရင်းနဲ့မှတ်ပုံတင်မရှိသူများမှာ အတော်အတန်ရှိနေပါသေးတယ်၊
ဤဖြစ်ရပ်များရှိနေပါက ကျေးရွာလူကြီးမှ ရွာတွင်မွေးဖွားပြီး၊ရွာတွင်ဘဲနေထိုင်သူဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါက ၊ထိုသူ၏ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးမဆုံးရူံးရအောင်အရပ်သဘောလုပ်ပေးကြရတာလည်းရှိနေနိုင်ပါတယ်၊
ထို့ပြင်ရွာတွင်သေဆုံးသူများအား သေစာရင်းမလုပ်နိုင်ကြ၊ လုပ်ရမှန်းမသိတာတွေကလည်းအများကြီးရှိနေကြပါသေးတယ်၊
တစ်ချို့ဆို ကိုယ်မွေးတဲ့ရက်၊လ၊နှစ်ကိုမသိကြပါဘူး၊ ဘယ်ဇာတ်အဖွဲ့ရွာကိုလာကသွားတဲ့နှစ်မှာမွေးတာတို့ဘာတို့ဆိုတာတွေလည်းရှိနေနိုင်ပါတယ်၊
ဒီတော့ နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့နှစ်လယ်တို့၊လလယ်ရက်တို့ကို သတ်မှတ်ပေးလိုက်ရတာတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်၊
လဝက၏ လုပ်ဆောင်နိုင်မူအားနည်းတာတွေကလည်း နှစ်ပေါင်း ဆယ်ချီရှိနေပါပြီ၊
ယခုခေတ်ကာလရောက်မှ မွေးဖွားတဲ့ကလေးတွေစာရင်းကို လဝက ကတစ်ဖြေးဖြေးခြင်းပြန်ကြိုးစားနေတယ်လို့ ကြားနေရပါတယ်၊
ထိုဖြစ်စဉ်အခြေအနေအားလုံးကို ယခင်က အစိုးရလုပ်ခဲ့ကြသော လူကြီးမင်းများကသိနေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်၊
တပ်မတော်မှ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြပါသော လူကြီးမင်းများကလည်းသိနေကြပါလိမ့်မယ်၊
ဒါကို မဲစာရင်းအမှားများနဲ့ မဲမသမာမာမူများဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟု (၂၄) ကြိမ်မြောက်အထိထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်၊
တည်ဆဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက ပြဌာန်းဆုံးဖြတ်ပေးထားသော နိုင်ငံတော်အာဏာသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ တာဝန်ပေးအပ်ထားသည့်ရွေးချယ်ခံအစိုးရ၏ လက်ဝယ်၌သာရှိနေပါတယ်၊
အကြောင်းပြပြီး နိုင်ငံတော်အာဏာကို လွယ်လင့်တစ်ကူရယူနိုင်သော ဥပဒေပြဌာန်း၊ဆုံးဖြတ်ပေးထားမူသည် တည်ဆဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ပြဌာန်းထားမူမရှိပါပေ၊
ပုဒ်မ(၄၄၄) ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအာဏာ တည်သည့်နေ့၌ တည်ရှိနေသော အစိုးရအဖွဲ့သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ၊
တာဝန်ပေးအပ်သည့် အစိုးရအဖွဲ့ မပေါ်ပေါက်မီ မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်များကို၊
သဘောအယူအဆများ၊ ဖွင့်ဆိုရာ၌ မြန်မာစာဖြင့်ရေးသားထားချက်များအပေါ်တွင်သာ
ပုဒ်မ(၄၅၃) ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ စကားရပ်များကို အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင် တည်ဆဲစကားရပ်များ၊အနက်အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုရေးဥပဒေကို ကိုးကားရမည်။
အထက်ပါတွင်ရေးသားထားပါသော အကြောင်းအရာ၊ ဖြစ်စဉ်၊အခင်းအကျင်း အခြေအနေများအား ထောက်ရှု ချင့်ချိန် တွေးဆကြ၍
မိမိတို့နိုင်ငံအတွက် စည်းလုံး ညီညွတ်ကြပါ